Haacaaluu Hundessaa:The Rising Super Star – YEROOBLOG
Haacaaluu Hundessaa:The Rising Super Star
Yerooblog	Culture&History	 August 28, 2015 December 25, 2015 1 Minute
Yeroo ammaa kanatti wallistoota Oromoo jaalaala fi kabaja guddaa uummata Oromoorra argatan keessaa tokko Haacaaluu Hundeessaati. Walaloon inni sirbootasaa keessatti fayyadamu kan ajaa’ibaati. Yeedalloon isaa adda. Kanaaf, sirboonni Haacaaluu baay’ee nama hawwatu; gurra namaatti baay’ee mi’aawu. Ergaan isaanii guddoo cimaadha. Nama onnachiisu; rakkina uummata keenyaa ifatti baasu. Bareedina Oromoo fi Oromiyaa faarsu. Oromoon akka tokkoomu gorsu.
Haacaaluun sagalee miidhagaa fi adda ta’e rabbi isa badhaaseera. Yeroo sirbu bareechee, mararsiifatee, lubbuu itti horee sirba. Sirboonni isaa hundi kan jaalalan dhaggeeffatamani dha. Kan gatamu tokkollee hin qaban. Waan kana ta’eef, yeroo gabaaba keessatti Oromoota hunda biratti fudhatama guddaa argate jira. Oromoo ta’ee kan Haacaaluu hindinqisiifannee ykn hin jaalanne arguun nama rakkisa. Naamoonni amantiin keenya sirba dhaggeffachuu nudhorka jedhannillee, yerootti isaan sirba Haacaaluu dhageeffatan ni jira. “Kan sirbu Haacaaluu taanaan, waaqayyo gooftaan hin mufatu,” jedhanii kan yaadan fakkaata.
Anii fi maatiinkoo, Haacaaluu baay’e dinqisiifanna, baay’ee jaalannas. Keesumaa, mucaan keenyi, Naabeek, sirboota Haacaaluu akka malee jaalata. Yeroo daa’ima xiqqaa ture, yoo sirbaa Haacaaluu dhaggeefate malee hirbni isa hifudhatu ture. Sirbi Haacaaluu yoo banamuufii baatee, boo’ee hin dhiisu. Waa’ee Haacaaluu afaansaa mi’aayaa sanaan haasa’ee hin quufu. Moobaayila kiyyarraa ykn kan harmeesaarraa, sirba Haacaaluu banatee dhaggeefachaa oola.
Namoota mana keenya dhufan maratti waa’ee Haacaaluu odeessa. “Haacaaluun Ameerikaa jira; Hacaaluun xiyaara qaba; Haacaaluutiin baay’een jaaladha; Haacaaluun mana keenya dhufee nudubbisa,” jedha. Namoonni taphaaf jedhanii gaafa isaan, “Haacaaluu hin jaalannu,” jedhan ni booya. Waa’ee Haacaaluu hamaa dhaga’uu hin barbaadu. Egaa, daa’immanillee Haacaaluu haga kana jaalatu. Ani fi haati warraakoo, Haacaaluu, waltajjii adda addarratti yeroon inni wallisu qaamaan argineera; waltajjiitti olbaanees isa wajjin shubbisneerra(bara 2010 Finfinnee galama Puushkiinitti akkasumas Adaamaa, Galma Abbaa Gadaatti).
Amma garuu Naabeek akka qaamaan isa argu barbaadna. Hammasitti, sirboota Haacaaluun yeroo adda addaatti baase dhaggeefachaa ittiin bashannanna.
Previous Post MEMORIES OF MY FIRST JOURNEY TO BORENA
Next Post Obama in Addis Abeba (July 26/2015)